Hlola eNew York, Usa - World Tourism Portal
Hlola eNew York, Usa
Yini ukubona. Izindawo ezihamba phambili ezihamba phambili eNew York, Usa
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha eNew York
Bukela ividiyo ekhuluma ngeNew York
Hlola iNew York futhi ebizwa ngokuthi yi "The Big Apple", idolobha elinabantu abaningi kunazo zonke e-United States, enye yezindawo ezinkulu zikaMasipala ze15 emhlabeni. INew York City iyisikhungo sabezindaba, isiko, ukudla, imfashini, ubuciko, ucwaningo, ezezimali kanye nezohwebo. Inesinye sama-skylines amakhulu kakhulu futhi adume kakhulu emhlabeni, aphethwe yisakhiwo sodumo se-State State.
INew York City iqukethe izifunda ezinhlanu, okuyizifunda ezihlanu ezihlukene. Isifunda ngasinye sinamasiko ahlukile futhi singaba idolobha elikhulu ngokwaso. Kuyo yonke indawo enomakhelwane, amanye amakhilomitha ayikhulu ngosayizi, kanti amanye amabhulokhi ambalwa ngosayizi, anezici ezidalulwe emculweni nakifilimu. Lapho uhlala, usebenza, futhi udlala eNew York usho okuthile kwabaseNew York mayelana nokuthi ungubani.
Isiqhingi esidumile phakathi kwe-Hudson ne-East Rivers, esinendawo eziningi ezihlukile nezingqayizivele. IManhattan iyikhaya le-Empire State Building eMidtown, Central Park, Times Square, Wall Street, Harlem, kanye nezindawo ezishisayo zaseGreenwich Village naseSoHo.
I-Brooklyn (Amakhosi County)
Indawo yokuhlala enabantu abaningi kakhulu, futhi eyayikade idolobha elihlukile. Itholakala eningizimu nasempumalanga yeManhattan ngaphesheya koMfula i-East. Yaziwa ngeBroot Botanic Garden, iProspect Park, iMnyuziyamu yaseBrooklyn, iNew York Aquarium kanye neCC Island esemqoka yaseNCC.
I-Queens (Queens County)
Itholakala empumalanga yeManhattan, ngaphesheya koMfula i-East, nasenyakatho, empumalanga naseningizimu yeBrooklyn. Ngezilimi ezingaphezu kwe-170 ezikhulunywayo, iQueens yisifunda esihluke kakhulu kunazo zonke kwezempilo e-United States, nesinye sehlukahlukana kakhulu emhlabeni.
I-Bronx (Bronx County)
Itholakala enyakatho yeManhattan Island, iBronx iyikhaya leBronx Zoo, iNew York Botanical Gardens, neqembu laseNew York Yankees.
IStaten Island (iRichmond County)
Isiqhingi esikhulu eNew York Harbour, eningizimu yeManhattan futhi ngaphesheya kweKill Van Kull emincane kusuka eNew Jersey. Ngokungafani nayo yonke iNew York City, iStaten Island sinomlingiswa ongaphansi komhlaba. Kuyaziwa ngokuthi yisakhiwo sepaki. Ineqembu layo le-baseball, izitolo ezinkulu eziningana, kanye ne-zoo.
INew York City ingenye yezindawo zomhlaba zezimali zomhlaba wonke, ezombusazwe, ezokuxhumana, ifilimu, umculo, imfashini namasiko. Kanye London ingelinye lamazwe amabili kuphela avumelekile emhlabeni jikelele ukuthi yi- "World Cities" - amadolobha abaluleke kakhulu futhi anamandla emhlabeni. Ikhaya laso kuminyuziyamu eminingi esezingeni lomhlaba, imidwebo yobuciko, nezinkundla zemidlalo yaseshashalazini. Izinhlangano eziningi ezinkulu zomhlaba zinendlunkulu yazo lapha. Indlunkulu yeNhlangano Yezizwe iseNew York futhi amazwe amaningi anenxusa lapha. Ithonya laleli dolobha emhlabeni wonke, kanye nabo bonke abakhileyo kulo, kunzima ukulisebenzisa ngokweqile, njengoba izinqumo ezenziwa ngaphakathi kwemingcele yalo zivame ukuba nomthelela kanye nokuqina emhlabeni wonke.
Abafuduki (kanye nenzalo yabo) abavela emazweni angaphezu kwe-180 bahlala lapha, bakwenza elinye lamadolobha amakhulu emhlabeni. Abahambi bakhangwa iNew York City ngesiko layo, amandla ayo kanye nendawo yonke. IsiNgisi yilona limi olusemqoka olukhulunywa iningi laseNew Yorkers yize emiphakathini eminingi kuvamile ukuzwa ezinye izilimi eziqondwa kabanzi. Emiphakathini eminingi, kunenqwaba yabantu baseLatino / Hispanic, futhi abantu abaningi baseNew York bakhuluma iSpanishi. Iningi labashayeli be-cab bakhuluma isi-Arabhu, isiHindi noma isiBengali. Kukhona nezindawo eziningi eziseduzane kulo lonke idolobha ezinenqwaba yabokufika baseChina lapho iMandarin noma isiCantonese zingaba usizo. Kwezinye zalezi zindawo zomakhelwane, abanye abantu bendawo kungenzeka bangasikhulumi kahle isiNgisi, kepha abanikazi bezitolo nalabo abazosebenza kakhulu nezivakashi noma izivakashi bonke bazokhuluma isiNgisi.
INew York City inesimo sezulu esishisayo esishisayo futhi ibhekana nazo zonke izinkathi ezine zonyaka, inezikhathi ezishisayo nezinomswakama (iJun-Sep), izindawo ezipholile nezomile (Sep-Dec), ubusika obubandayo (Dec-Mar), kanye neziphethu ezimanzi (Mar-Jun ).
Inani labantu abahlukahlukene ligijimisa le-gamut kusuka kwabanye osaziwayo abacebile kakhulu baseMelika kanye nabezenhlalo ukuya kubantu abangenakhaya. Kunezigidi zabokufika abahlala edolobheni. Isibalo sabantu baseNew York besihlukile kusukela kwasungulwa leli dolobha ngabaseDashi. Amagagasi alandelanayo okufuduka kuwo wonke amazwe emhlabeni enza iNew York ibe yisilingo esikhulu senhlalo ekuvumelaneni ngamasiko.
Idolobha le-Τ lixhunywe kahle emoyeni ngezindiza ezivela cishe kuwo wonke amagumbi omhlaba. Izikhumulo zezindiza ezintathu ezinkulu neziningana zisebenzela esifundeni.
I-John F. Kennedy International Airport kanye ne-Newark Liberty International Airport (eyamuva eNew Jersey) ziyizikhumulo zezindiza ezinkulu zomhlaba wonke, kanti isikhumulo sezindiza i-LaGuardia siyisikhumulo sezindiza sasekhaya esimatasa.
Njengamadolobha amaningi amakhulu omhlaba, iNew York inezinto eziningi ezinhle ezithandekayo - eziningi kakhulu, ukuthi bekungenakwenzeka ukuzibhala zonke lapha. Okulandelayo kumane nje kuyizibonelo zokukhangiswa okunephrofayili ephezulu kakhulu eNew York City.
Izindawo eziningi zokuvakasha eNew York City zinikezela ukwamukelwa kwamahhala noma okunephulelo ngezinsuku ezithile, ism Museum of Modern Art's Free Friday, noma iminyuziyamu ohlelweni lwe-Us® olwenziwe yiBank of America. bona okuningi eNew York
Amathiyetha nezobuciko eNew York
INew York ingelinye lamadolobha amakhulu amafilimu emhlabeni, ekhaya inamba enkulu yemidlalo yeshashalazi edlala izinhlelo ezizimele neziphindaphindekayo. Izitudiyo eziningi ezinkulu zase-US zikhishwa ekuqaleni eNew York kunakwenye indawo (ikakhulukazi ekwindla) futhi zitholakala kuma-cineplexes amakhulu azungeze idolobha. Njengayo yonke into eseNew York, ama-movie athandwa kakhulu, kanti namafilimu angacacisiwe ngezikhathi ezithile zosuku angavezwa. Kuhle ukuthola amathikithi kusenesikhathi noma nini lapho kungenzeka.
INew York City ibamba izindondo eziningi, imikhosi yasemgwaqweni kanye nabangaphandle kwekhasi. Lezi ngezinye zezinto ezidume kakhulu:
New York's Village Halloween Parade. I-Halloween ngayinye (i-31 Oct) e-7PM. Le parade kanye nekhasi lomgwaqo liheha ababukeli abayizigidi ezingama-2 kanye nababizi bezindleko ze50,000 abazisebenzisile eduze kweSithupha Ave phakathi kweSky St ne-21st St. Noma ngubani osemgqokeni wamukelekile kwimashi; labo abafisa, kufanele babonise i-6PM-9PM e-Spring St nase-6th Ave.
I-Paracy Yosuku Lokubonga lukaMacy. Ekuseni kwe-Thanksgiving ngayinye eCentral Park W, le parade iheha ababukeli abaningi futhi isakazwa kuthelevishini ezweni lonke.
I-Parade yoSuku lukaSanta uPatrick. Parade enkulu kunazo zonke eSt Paddy emhlabeni! Umzila ukhuphukile u-5th Ave usuka ku-44th St uye ku-86th St futhi uhlala ku-11AM uya cishe nge-2: 30PM. Imikhosi kuma-pub edolobheni lonke yenzeka ubusuku nemini kuze kube kuphela ubhiya oluhlaza.
Usuku Lwabasebenzi (olwaziwa nangokuthi yi-West Indian Day Parade noma i-New York Caribbean Carnival). Umgubho waminyaka yonke obubanjelwe eCrown Heights, eBrooklyn. Umcimbi waso omkhulu yi-West Indian-American Day Parade, edonsela izibukeli ezigidini ezigidigidi ezintathu, ngaleyo ndlela ithathe ithrafikhi ethe xaxa ngosuku olulodwa kunayo yonke umcimbi weToronto's Caribana festival. Izibukeli zibuka lo mgqumeni usendleleni ebheke e-Eastern Parkway. Le parade enkulu yenziwa ngoSuku lwabasebenzi baseMelika, uMsombuluko wokuqala ngoSepthemba.
INew York iyinhlokodolobha yezemfashini e-United States, futhi iyindawo enkulu yokuthenga kubantu emhlabeni jikelele. Idolobha leli linezindawo eziningi ezingenakuqhathaniswa zezitolo zomnyango, izindawo zokuphumula kanye nezitolo ezikhethekile. Abanye omakhelwane baziqhenya kakhulu ngezinketho zokuthenga kunamanye amadolobha aseMelika futhi badume njengezindawo abathengi abangazisebenzisa. Noma yini ongafuna ukuyithenga itholakala eNew York, kufaka phakathi okokugqoka, amakhamera, amakhompyutha nezinye izinsiza, umculo, izinsimbi zomculo, imishini ye-elekthronikhi, izinto zobuciko, izimpahla zemidlalo, nazo zonke izinhlobo zokudla kanye nezinto zasendlini ekhishini.
Noma ngubani angadala ngokukhululekile, abonise, futhi athengise ubuciko, kufaka phakathi imidwebo, imidwebo, izithombe, izazi, amaDVD namaCD, kususelwa kwinkululeko yamalungelo okukhuluma. Izinkulungwane zabadwebi zithola imali yazo emigwaqweni yase-NYC nasemapaki. Izindawo ezivamile zokuthola abaculi basemgwaqweni abathengisa imisebenzi yabo yiSoHo eLower Manhattan kanye naseMetropolitan Museum of Art ku81st Street.
INew York City inezindawo eziningi okuthengiswa kuzo, enikeza izaphulelo ezinkulu kanye nethuba lokuthenga iziphetho zemizuzwana nemizuzwana efektri. ICentury 21 eManhattan ingesinye sezitolo ezinkulu lapho abaseNew York bathola izigqoko zokugqoka ezingaphansi.
Ukudla okuyisisekelo, iziphuzo, ukudla okulula, umuthi kanye nezindlu zangasese kungatholakala ngamanani amahle ezitolo ezihle zeWalgreens / iDuane Reade, i-CVS, kanye nezitolo zeRite Aid. Ukuze uthole okuhlangenwe nakho okuyiqiniso kweNew York, yeka ngenye yezinkulungwane zama-bodegas / delis / ezitolo zokudla.
ENew York City kujwayelekile ukuthi abathengisi basemgwaqweni bamise amatafula eceleni kwendlela, eduze kwendlela, badayise nezinto. Bayacelwa ukuthi bathole imvume yokwenza lo msebenzi, kepha kusemthethweni. Ukuthengwa kwalaba bathengisi kuvumelekile, noma ukuthenga izimpahla zamagama kubathengisi (ikakhulukazi okubiza kakhulu namafilimu) akuxwayiswa njengoba imikhiqizo ethengiswayo ingaba yimikhiqizo yokulingisa eshibhile. Kubhekwa njengokuphephile ukuthenga izimpahla ezingabizi kakhulu kubathengisi, kodwa iningi ngeke likwamukele ukukhokhelwa ngekhadi lesikweletu, ngakho-ke kuzofanele ulethe imali. Qaphelisisa noma yimuphi umthengisi womgwaqo ongathengisi etafuleni (ikakhulukazi abathengisi abasondela kuwe bethengisa izinto zabo esikhwameni) ngoba lezi zimpahla cishe ziyimikhiqizo yokulingisa eshibhile.
Ukuthi uzodlani eNew York
Amabha - Phuza eNew York
I-Wi-Fi iyatholakala emapaki amadolobha kanye nemitapo yolwazi embalwa. Isitolo se-Apple sinamakhompyutha amaningi futhi akubonakali ukuthi abantu abaningi bawasebenzisela ukufinyelela i-inthanethi yamahhala, kodwa bangaba matasa kakhulu ngezikhathi ezithile. I-Easy Internet Cafe neHhovisi leFedEx kumane nje kungezinye zezindawo zokudlela ze-inthanethi ezinikezela nge-inthanethi ye-Broadband ngamanani afanele. Ukuthola isitolo okunendawo okuphehla amandla kuyo kungaba nzima ngakho-ke qiniseka ukuthi idivaysi yakho ishajeke ngokuphelele nebhethri layo lisebenza kahle.
INew York iyidolobha elibiza kakhulu e-United States lapho uhlala khona futhi uvakashele, yize ubheka izivakashi, ungalindela ukuthi izindleko zingaqhathaniswa namanye “amadolobha amakhulu” anjengeLondon, Paris futhi Tokyo. Enye yezindleko ezinkulu lapho uvakashela eNew York indawo yokuhlala - inani eliphakathi nendawo yegumbi elihle laseManhattan akuvamisile ukungena ngaphansi kwe- $ 200 ngobusuku. Ngasohlangothini lwe-flip, ukudla ezindaweni zokudlela - akubizi kakhulu ukubuka inani elikhulu lomncintiswano nokuzikhethela okunikezwayo. Njengokuya ezindaweni ezivakashelwa kakhulu izivakashi, iNew York inengxenye yayo “yezingibe zezivakashi” mayelana nezindlela zokudla nokuphuza, ezingabamba abangaqaphile.
Ukubhema ezindaweni zomphakathi kukhawulelwe kakhulu. Kuvinjelwe ezingxenyeni ezingaphakathi zemishayo, izindawo zokudlela, iziteshi ezingaphansi kwezitimela kanye nezitimela, amapaki omphakathi, amabhishi omphakathi, izitolo ezinkulu zabahamba ngezinyawo, izinkundla zasendlini zangaphandle nezangaphandle kanye nezinkundla zemidlalo, nakwezinye izindawo eziningi zomphakathi. Kukhona okusele inani elincane lemishayo ye-cigar esemthethweni engafakwanga, njengoba kunjalo nangaphandle kwezindawo zokudlela zamakhofi nokunye okufana nalokhu, kepha lokhu kunjalo kakhulu. Uma udinga ukubhema ngenkathi udla noma uphuza, zilungiselele ukuthatha ikhefu futhi uhlanganyele abanye ababhemayo ngaphandle, noma ngabe yisiphi isimo sezulu; izikhungo eziningi zinokushisa isikhala esiningi. Njengasemadolobheni amaningi ase-US, ukuphuza uphuzo oludakayo akukho emthethweni, ngakho-ke imigoqo ngeke ikuvumele ukuthi uphuze isiphuzo sakho ngaphandle.
Izindawo eziseduze naseNew York ukuvakashela